Agaasinka Guud ee Hawlaha Guud ee Hayadda Shaqaalaha ee loo qoro Saraakiisha | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaAgaasinka Guud ee Hawlaha Hawlaha Guud
In laga shaqaaleeyo hay'adda gobolka ee Agaasinka Guud ee Hawlaha Hawlaha Dawladnimo iyada oo la raacayo Qodobka 657 / A ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ee Lambarka 4;
35 (soddon iyo shan) shaqaale injineer ah oo tirada gobolladooda, magacyadooda iyo lambarradooda hoos lagu siiyay ayaa ka mid ah kuwa ugu yaraan 2018 dhibcood ka helay nooca dhibcaha KPSS P3 natiijada imtixaanka Xulashada Shacbiga ee Dadweynaha 70, Ballan ayaa loo sameyn doonaa Agaasimayaasha Guud ee Hawlaha Dawladnimada iyada oo ay sabab u tahay imtixaanka ficil ee la qaban doono Febraayo 07, 11 iyada oo la raacayo qaab-dhismeedka Xeerka Imtixaanaadka iyo Ballan-qaadka Injineerada Shaqaalaha in loo Magacaabey Markii Ugu Horeysay ee Shalay.
1 - LAMBAR MUUQAAL, SHAQAALAHA IYO SHURUUDAHA FASALKA
A) Injineer Madaniga ah
Magacaabay Gobolka Meelaynta Tirada Shaqaalaha Injineerka loo magacaabayo
1 XANUUNKA 1
Si aad uga qalin jebiso injineernimada madaniga (Lambarka Diiwaangelinta YÖKSİS: 3468) ee kulliyadaha ama machadyada tacliinta sare ee u dhigma u oggolaaday Golaha Tacliinta Sare illaa maalinta ugu dambeysa ee arjiga la soo codsaday.
B) Injineerinka Beeraha ama Injineeriyada Noolaha
C) Injineerinka Farsamada
In laga qalinjabiyo injineernimada injineernimada (Diiwaangelinta YÖKSİS No: 3987) ee kulliyadaha ama jaamacadaha tacliinta sare oo u dhigma u ogolaanay Golaha Tacliinta Sare ilaa taariikhda ugu dambeysa ee arjiga la soo codsaday.
D) Khadka Injineerka ama Geodesy iyo Injineerinka sawir-sameynta ama Injineerinka Geomatic ama Geodesy iyo Injineerinka sawir-qaade, geomatic ama Geodesy iyo Injineerinka sawir-qaade, dareeme fog
Injineerka Juquraafiga (Nambarka Diiwaangelinta YÖKS :S: 3191) ama Geodesy iyo Sawirrada sawir-samaynta (Lambarka Diiwaangelinta YÖKSİS: 3588) ama Geodesy iyo Injineerinka sawir-qaadista, 3585) ama Geodesy iyo Injineerinka sawir-qaade, dareemida fog (Diiwaangelinta YÖKSİS Maya: 3586) ama injineerinka Gomatic (Diiwaangelinta YÖKSİS No: 3051).
E) Injineerinka cilmiga dhulka ama injineeriyada biyaha
Qalin jebinta injineerinka cilmiga dhulka (Diiwaan galinta YÖKSİS no: 3594) ama Hydrogeological Engineering (Diiwaangelinta YÖKSİS No: 3288) ee kulliyadaha ama machadyada tacliinta sare ee ay ansixiyeen Golaha Tacliinta Sare illaa iyo maalinta ugu dambeysa ee arjiga la soo codsaday.
F) Injineerka Korantada ama Korantada - Injineerka Koronto
In laga qalinjabiyo Injineerinka Korantada (Lambarka Diiwaangelinta YÖKSİS: 2637) iyo Koronto-Elektaroonigga ah (Lambarka Diiwaangelinta YÖKSİS: 2644) ee kulliyadaha ama jaamacadaha tacliinta sare ee ay ansaxisay Golaha Tacliinta Sare illaa maalinta ugu dambeysa ee arjiga la soo codsaday.
G) Injineer Deegaanka
Si aad uga qalin jebiso Waaxda Injineeriyada Deegaanka (Diiwaangelinta YÖKSİS lambar: 2270 ama 2271) ee kulliyadaha ama machadyada tacliinta sare ee u dhigma ay oggolaadeen Golaha Tacliinta Sare illaa taariikhda codsigii ugu dambeeyay.
H) Injineer xisaabeed
Si aad uga qalin jebiso Waaxda Injineeriyada Xisaabta (Diiwaangelinta YÖKSİS No: 4053) ee kulliyadaha ama machadyada tacliinta sare ee u dhigma ay oggolaadeen Golaha Tacliinta Sare illaa taariikhda ugu dambeysa ee arjiga la soo dalbado.
I) Injineer Saadaasha Hawada
In laga qalinjabiyo waaxda injineeriyada saadaasha hawada (Diiwaangelinta YÖKSİS ee No: 4120) ee kulliyadaha ama machadyada tacliinta sare oo u dhigma u oggolaaday Golaha Sare illaa taariikhda codsigii ugu dambeeyay.
2 - SHURUUDAHA SHURUUDAHA
a) In la buuxiyo shuruudaha guud ee lagu sheegay qodobka 657 ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah ee 48,
b) Natiijada Imtixaanka Xulashada Shaqaalaha Dadweynaha 2018, KPSS waxay leedahay ugu yaraan 3
c) In la qaado duruufaha caafimaad ee ka shaqeyn kara dhammaan qaybaha dalka iyo xaaladaha dhulka.
3 - Goobta iyo FOOMKA CODSASHADA
Codsiyada si elektaroonig ah http://personelalimi.dsi.gov.tr Waxaa lagu dhammeystiri doonaa buuxinta foomka Codsiga Imtixaannada Shaqada Hydraulic ee Gobolka. Murashaxiinta u qalma inay galaan imtixaanka la dalbaday waxaa laga rabaa inay soo gudbiyaan foomka dalabka, maadaama ay u soo diri doonaan foomka arjiga saxeexan Agaasinka Guud.
Ma jiro xad xadid ah oo doorashada ah oo musharrax walbana wuxuu awood u yeelan karaa inuu sameeyo xulashooyin badan inta tirada gobollada ay laamihiisa / keeda leedahay.
Maadaama codsiyada lagu sameyn doono oo keliya jawiga elektiroonigga ah, codsiyada lagu sameeyo shaqsi ama boostada lama aqbali doono.
4 - TAARIIKHDA CODSIGA
tixraacyada; Taariikhda Janaayo 8, 2020 waxay bilaabaneysaa 10.00, taarikhda Janaayo 17, 2020 wuxuu dhamaan doonaa 24.00.
5 - QIIMAYNTA CODSADAHA
Laga bilaabo dhibcaha ugu sareeya ee KPSSP3 ee codsadayaasha iyo codsadayaasha la aqbalay, afar jeer tirada musharixiinta la magacaabayo (oo ay ku jiraan kuwa hela isla dhibco kuwii musharraxii ugu dambeeyay) ayaa uqalma inay galaan imtixaanka la dalbaday.
6 - TAARIIKHDA TAARIIKHDA iyo Goobta
Musharixiinta in lagu casuumo imtixaanka la dalbaday; Macluumaadka magacyada iyo magacyada, goobta imtixaanka, taariikhda iyo waqtiga imtixaanka ee Janaayo 22, 2020 http://www.dsi.gov.tr lagu shaacin doonaa at. Intaas waxaa sii dheer, musharixiinta waxaa lagu ogeysiinayaa si elektaroonig ah.
7 - SHARAXAADA LOO BAAHAN YAHAY Tijaabada Imtixaanaadka
Codsadayaasha u qalma inay galaan imtixaanka la dalbaday waa inay soo gudbiyaan foomka arjiga ee saxeexan ee foomka Codsiga Imtixaannada Shaqada Hawlaha Guud oo ay la socdaan dukumiintiga soo socda ugu dambeyn 31ka Janaayo 2020 xafiiska Imtixaanka Shaqada ee Agaasinka Guud ee guud iyadoo loo diro boostada. Waaxda Shaqaalaha.
b) Nuqul koobi kumbiyuutar ah oo dukumiinti ah natiijada KPSS ee sannadka 2018,
d) Saddex sawir oo baasaboor.
Haddii ay dhacdo in dukumiintiyada lagu diro boostada, codsiyada loo gudbiyo diiwaanka Agaasinka Guud kadib dhamaadka muddada shaqada ee 31 Janaayo 2020 sababtuna tahay dib u dhac ama sababaha la midka ah lama tixgelin doono.
8 - Hordhac Tijaabooyin Hordhac ah
Imtixaanka gelitaanka ayaa la adeegsan doonaa.
Murashaxiinta ku jira imtixaanka; waxaa lagu qiimeyn doonaa in ka badan boqol dhibcood oo ku saleysan aqoonta xirfadeed ee mihnadeed iyo maadooyinka waxqabadka ee Agaasinka Guud. Kuwa hela ugu yaraan toddobaatan dhibcood boqol ka mid ah imtixaanka la dalbaday waxaa loo tixgeliyaa inay guuleysteen.
9 - QIIMEYN
Imtixaannada Dhibcaha uu siiyo xubin kasta oo ka mid ah Komishanka ayaa si gaar ah loo diiwaangeliyaa oo celceliska xisaabta ee darajooyinka ay xubnuhu bixiyaan wax ka badan boqol dhibcood oo buuxa ayaa lagu go'aamiyaa dhibcaha imtixaanka murashaxa ee musharraxa.
Liiska ugu dambeeyo ee guusha ayaa loo diyaariyaa iyadoo loo eegayo dhibcaha guusha musharrixiinta oo ku saleysan celceliska xisaabta celceliska buundada la isticmaalay iyo dhibcaha KPSSP3. In kasta oo lagu qiimeeyo liisaska asalka ah iyo keydka, haddii natiijada guusha musharraxiinta ay lamid tahay, murashaxa leh dhibcaha imtixaanka sare ee la dalbaday, murashaxiinta leh imtixaanka sare ee dhibcaha imtixaanka wuxuu la mid yahay murashaxa haysta dhibco sare KPSSP3, haddii tani ay la mid tahay kan qalin-jebiyey ee marka hore qalin-jabiyay, haddii ay tan la mid tahay mudnaanta waxaa la siiyaa murashax da 'weyn.
Natiijooyinka imtixaanka gelitaanka waxaa loo kala saari doonaa iyadoo loo eegayo natiijada guusha laga bilaabo dhibcaha ugu sareeya iyo liisaska dhabta ah iyo kuwa beddelka ayaa la go'aamin doonaa.
Kuwa ku guuleysta Imtixaanka Galitaanka laakiin aan bilaabin ama aan bilaabin ama loo xilsaaray arrimo kala duwan ayaa la magacaabaa muddo lix bilood ah kadib ku dhawaaqista natiijada imtixaanka.
10 - MAGACA UGU DANBEEYSAY DIINTA JAWAABAHA IYO UJEEDADA
Natiijooyinka Imtixaanka Galitaanka http://www.dsi.gov.tr Ogeysiis qoraal ah ayaa loo sameyn doonaa musharixiinta guuleysta.
Musharixiintu waxay rafcaan ka qaadan karaan guddiga imtixaanka iyagoo qoraal ah shan maalmood gudahood markii lagu dhawaaqo natiijada imtixaanka gelitaanka. Diidmada waxaa baaraya oo xaliya Gudiga baarista todoba maalmood oo shaqo gudahooda kadib dhamaadka waqtiga diidmada oo natiijada waxaa lagu ogeysiinayaa musharaxa qoraal ahaan.
11 - FADLANADA KALE
Nidaamka ballanta ee kuwa aan ku jirin liiska asalka ah iyo kuwa aan lahayn shuruudaha lagama maarmaanka ah haddii aysan laheyn cudurdaar ansax ah gudahood muddada lagu ogeysiiyo gudashada habraaca meeleynta lama fulin doono.
Murashaxiinta aan dalbanin cudurdaar la'aan mudada lagu ogeysiiyay magacaabista ama aan bilaabin inay shaqeyso waqtiga loo magacaabay looma tixgelin doono inay u qalmaan.
Kuwa aan codsan muddada gudahooda lagu sheegay ogeysiinta in loo sameeyo iyaga, kuwa ka faa'iideysanaya hawsha magacaabista, kuwa ballantooda la joojiyay, iyo in aysan fulin wax ka mid ah shuruudaha gelitaanka adeegga bulshada, waxaa lagu beddeli doonaa murashaxiinta ku jira liiska kaydka iyada oo loo amrayo isla mabaadi'da isla mabaadi'da.
Kuwa lagu helo inay warbixin been abuur ah ka sameeyeen Foomka Codsiga Imtixaanka Galitaanka looma meeleyn doono inay yihiin wax aan waxtar lahayn oo imtixaannada, iyo xitaa haddii sidan loo magacaabay, ballamaha noocaas ah waa la baabi'in doonaa oo wax sheegasho ah lama sameyn doono.
Intaas waxaa sii dheer, Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa loo gudbin doonaa dacwad ciqaabeed si loogu dabaqo qodobbada la xiriira ee Xeerka Ciqaabta Turkiga ee ku saabsan kuwa lagu helay inay been abuur sameeyeen.
Waa la xayeysiiyaa. 11607 / 1-1
Maanta taariikhda: 22 June 1953 Agaasimaha Guud ee Dalladaha Gobolka iyo Dekadaha ...
Agaasinka guud ee qorista cilmu-nafsiga Booliis
Qorista Sarkaalka DSİ